Fandaharanasa Yess-Project : manome ohatra ireo tanora vehivavy afrikanina sy aziatika | NewsMada
Fandaharanasa Yess-Project : manome ohatra ireo tanora vehivavy afrikanina sy aziatika
Mizara ny traikefa fantany ny tanora efatra mirahavavy avy atsy Afrika sy Azia, mivahiny eto amintsika. Voakasik’izany ny fandraisana andraikitry ny vehivavy, sy ny fanomezan-danja ny tontolo iainana any aminy avy.
Tetikasa manome vahana ny tanora vehivavy aty amin’ny firenena samy atsimo ny Yess project (Youth exchange south to south). Voakasik’izany ny aty Afrika sy Azia, ahitana firenena 10 toa an’i Madagasikara, tohanan’ny fikambanana FK Norway-WAGGGS avy any Norvezy. Maharitra enim-bolana ny tetikasa, ary manatanteraka azy eto amintsika ny sampana skoty zazavavy ao amin’ny Fiangonana katolika, ny Fanilon’i Madagasikara. Tanjona ny handraisan’ny tanora vavy andraikitra sahady eo amin’ny lafin-javatra samihafa, mitondra fampandrosoana ny firenena. Ao anatin’izany ny lafiny toekarena, ny sosialy, ny tontolo iainana, sns. Miainga amin’ny singa tsotra indrindra izany ary miitatra tsikelikely hatrany amin’ny fandraisana andraikitra eo amin’ny firenena mihitsy aza.
Tafiditra ao anatin’ny lohahevitra amin’ity taona 2018 ity ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady amin’ny fanambadian’ny tanora vavy aloha loatra. Mifandraika amin’ny lohahevitra voizin’ny skotisma eran-tany izany ary manatanteraka azy ny skoty isaky ny firenena, andraisan’ny Fanilon’i Madagasikara anjara. Anisan’ny zava-bitan’ity farany ny fanatsarana fotodrafitrasa, toy ny fandokoana sekoly, ny fanentanana any an-tsekoly sy fokontany, ny fambolen-kazo, sns.
Misy ny fifampizarana traikefa isaky ny firenena, fifanakalozana tanora vavy avy amin’ireo firenena mpikambana, tohanan’ny Yess-Project. Mijoro vavolombelona amin’izany i Aurnela Ataryo avy any Burindi, i Sheila Hineshi avy any Zambia, i Chifundo Berna Ngwale avy any Malawi ary i Subista Dhwoju avy any Nepal (Azia), mivahiny eto Madagasikara mandritra ny enim-bolana.
Mikasika ny ady amin’ny fanambadiana aloha loatra, nilaza i Sheila avy any Zambia fa manodidina ny 17-18 taona ny vehivavy any amin’izy ireo ny miditra amin’ny fanambadiana. Raha ny lalàna any Zambia anefa, 21 taona ny vehivavy vao mahazo manambady. Manana tetikasa ny sampana skoty any amin’izy ireo, manentana ny tanora hitojo amin’ny fianarana mba hisorohana an’io fanambadiana aloha loatra io.
Mandray andraikitra amin’ny firenena
Ho an’i Chifundo avy any Malawi, nambarany fa mahazo vahana tsikelikely izy ireo satria vehivavy ny filoham-pirenena any aminy. Vehivavy ny 50%-n’ny mpikambana ao anatin’ny governemanta. Toraka izany koa ny any Nepal, nilazan’i Subista fa vehivavy ny mitantana ny firenena any aminy ary vehivavy koa ny 30%-n’ny solombavambahoaka. Eo amin’ny tontolo iainana, vitsy ny ala any Nepal, satria be tendrombohitra, saingy ataon’ny mponina angovo fandrehitra ny tain’omby. Manentana ny vehivavy malagasy hafa hanana hazon-damosina izy. “Tratranao ny tanjonao rehefa matoky tena ianao”, hoy ihany izy.
Nahavariana an’i Aurnella avy any Burindi kosa ny nahitana vehivavy malagasy nitondra fiara minibus Mazda teto amintsika. Deraiko izany ary ho tateriko any aminay mba hanehoana fa mahavita zavatra ny vehivavy rehefa mahasahy.
Niray feo kosa i Chifundo (Malawi) sy i Sheila (Zambia) fa hentitra ny lalàna any amin’izy ireo. Tsy maintsy manolo, mamboly hazo roa ny olona manapaka hazo iray.